एमाले र जसपाबीच आज पनि वार्ता, के जसपा विभाजन हुन्छ ? — onlinedabali.com
एमाले र जसपाबीच आज पनि वार्ता, के जसपा विभाजन हुन्छ ?
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीबीच पनि वार्ता हुँदै छ । सत्तासमिकरणको विषयबारे थप छलफल गर्ने आज अपराह्न चार बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा वार्ता हुने भएको छ । विहीबारको वार्ता सकारात्मक भएको बताएका नेताहरु थप छलफल गर्न आज बैठक बस्न लागेका हुन् ।
आजको वार्ता निर्णायक हुने नेताहरुले बताएका छन् । जसपाका मागमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सकारात्मक भएको र त्यसबारे टुंगोमा पुग्न आज फेरि वार्ता हुने बताइएको छ ।
विहीबार जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायतका नेताहरुले निलम्वित सांसद टीकापुर घटनामा दोषी ठहर रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता र रिहाइ तथा मधेस आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन लगायतका सर्त राखेका थिए ।
ओली नेतृत्वको सरकारले हेर्ने जसपाबीच पनि दुई धार प्रष्ट देखिएका छन् । पूर्व मधेरी फोरम ओली नेतृत्वको सरकारमा जान नहुने पक्षमा छन् भने समाजवादीका नेताहरु महन्थ ठाकुर राजेन्द्र महतोले ओलीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।
निलम्वितबाहेक ३२ सांसद रहेका जसपा तानातानमा परेको छ । सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयलाई लिएर जसपा पनि विभाजन हुने सम्भावना पनि देखिएको छ । ओली सरकारलाई हेर्ने बिषयमा एक मत हुन नसक्दा जसपाभित्र किचलो भएको छ ।
महन्थ ठाकुरलगायतका नेताहरुले ओली सकारात्मक भएको बताएपनि बैठकपछि वरिष्ठ नेता अशोक राईले भने छलफलमा विचार आदानप्रदान मात्रै भएको बताए । उनले ओली आफूहरुको माग पूरा गर्नेमा आशावादी नभएको बताए ।
राईले यसो भनिरहँदा कार्यदल सदस्य नेता लक्ष्मणलाल कर्णर्ले भने बैठकमा कुराकानी सकारात्मक भएको र माग सम्बोधन हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताईरहेका थिए । यसले पनि के देखाउछ भने जसपाभित्र तीब्र असन्तुष्टि छ । संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले त ओलीको बहिर्गन मुख्य एजेण्डा भएको बताउँदै आएका छन् ।
जसपाका नेताहरुका फरकफरक धारणा हेर्दा सत्तासमिकरण निकै कठिन छ । तर, जसपा बिभाजन हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।